Rasaasta madaxa ’: Dagaalkii Yemen ayaa fure u ahaa xiisadda Iran iyo Mareykanka - Wardeeq 24 TV Rasaasta madaxa ’: Dagaalkii Yemen ayaa fure u ahaa xiisadda Iran iyo Mareykanka Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Rasaasta madaxa ’: Dagaalkii Yemen ayaa fure u ahaa xiisadda Iran iyo...
Rasaasta madaxa ’: Dagaalkii Yemen ayaa fure u ahaa xiisadda Iran iyo Mareykanka
Dagaalka magaalada lamadegaanka qadiimiga ah ee Yemen ee dagaalladu halakeeyeen wuxuu fure u noqday fahamka xiisadaha ballaaran ee hadda sii hurinaya Bariga Dhexe iyo caqabadaha horyaalla dadaal kasta oo maamulka Madaxweyne Joe Biden uu ku doonayo in ciidamada Mareykanka looga saaro gobolka.
Dagaalka ayaa ka socday buuraha ka baxsan Marib iyadoo fallaagada Xuutiyiinta ee Iiraan la safan, ee haysta caasimada Yemen ee Sanca, ay isku dayayaan inay qabsadaan magaalada, taas oo muhiim u ah sahayda tamarta ee dalka.
Dagaalkii Marib: Magaaladii ugu dambeysay ee woqooyiga Yemen oo ay maamusho dowladda
Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegay inay bilaabeen weerarada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay ku qaadeen caasimada Sacuudiga
Lamaane Mareykan ah oo la qabtay iyagoo qorsheynaya inay ku biiraan kooxda ISIL ee Yemen
Yemen: Hufnaan yar oo ku saabsan ballanqaadkii Mareykanka ee ahaa inuu joojinayo kaalmada uu siiyo isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga
Sacuudi Carabiya, oo hogaamineysay isbaheysi milatari tan iyo sanadkii 2015 oo taageertay dowladda dibad joogga ah ee Sanca, ayaa qaaday weeraro dhanka cirka ah oo isdaba joog ah si looga hortago Houthi-ka kusocota Marib. Xuutiyiinta ayaa ku aarguday weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay ku garaaceen gudaha Sacuudi Carabiya, iyagoo dhex mushaaxaya suuqyada saliida adduunka.
Dagaalka Marib wuxuu u badan yahay inuu go’aamin doono dulucda heshiis kasta oo siyaasadeed oo ka dhaca dagaalka labaad ee Yemen tan iyo 1990-yadii. Haddii ay gacanta ku dhigaan Xuutiyiinta, jabhaduhu waxay ku cadaadin karaan faa iidadaas wadahadalada waxayna xitaa sii wadi karaan koonfurta. Haddii la qabto, dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay waxay badbaadinaysaa malaha magaaladeeda keliya ee xoogga ku haysata iyada oo gooni-goosadyadu ay ku loolamayaan maamulkeeda meelo kale.
Dagaalku wuxuu sidoo kale culeys saarayaa culeyska saaran xulafada ugu awoodda badan Khaliijka Carabta ee Mareykanka wuxuuna hoosta ka xariiqayaa dib u soo noqoshada Mareykanka ee heshiiska nukliyeerka Iiraan. Xitaa waxay sii murgineysaa dadaalada maamulka Biden si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo meelihii tirada badnaa ee militariga Mareykanka la geeyay Bariga Dhexe si taa badalkeeda looga hortago waxa ay u aragto halista soo ifbaxeysa ee Shiinaha iyo Ruushka.
Luminta Marib waxay noqon doontaa “xabaddii ugu dambaysay ee madaxa dawladda caalamku aqoonsan yahay”, ayuu yidhi Abdulghani al-Iryani, oo ah baare sare oo ka tirsan Xarunta Sanca ee Daraasaadka Istiraatiijiga ah. “Waxaad fiirineysaa jiil xasillooni darro iyo dhibaato bina’aadanimo. Waxaad sidoo kale eegi doontaa tiyaatar bilaash ah oo dhan oo loogu talagalay faragalinta gobolka. ”
Previous articleMarkab laga leeyahay Iiraan oo lagu weeraray Badda Cas
Next articleTurkiga ayaa xabsi daa’im ku xukumay 22 askari oo horey uga tirsanaan jiray isku daygii afgambi ee 2016